Body शरीरका अंगहरू तपाईं धुम्रपान गरेर खराब गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईको जोर्नीहरूमा दुखाइ र जलन? धूम्रपान गर्नेहरूलाई रुमेटोइड गठिया (आरए) प्राप्त गर्न झुकाव बढी हुन्छ। र RA औषधिहरू धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूमा राम्रोसँग काम गर्दैनन्। वैज्ञानिकहरू निश्चित छैनन्।
तपाईं चाँडै चाँडो आशा गर्न सक्नुहुन्छ। धूम्रपानले तपाईको छालाको बुढो हुने प्रक्रियालाई दर दिन्छ। यसले 40० वर्ष पुरानो एपिडेर्मिसलाई नै नन्समोकिंग 70० वर्ष पुरानो जस्तो बनाउँदछ। यो हानि पूर्ववत गर्न सकिदैन र छालाको क्यान्सर जस्ता धेरै छाला रोगहरू गर्न सक्छ, अझ खराब।
उज्यालो पट्टि तपाईलाई म्याकुलर डिजेनेसन हुने सम्भावना हुन्छ, एक आँखा सर्त जसले तपाईले पढ्न, लेख्न, र अन्य व्यक्तिको अनुहारहरू हेर्न चाहेको केन्द्रीय दृष्टि नष्ट गर्दछ। तपाईं times पटक मोतियाबिना विकसित हुने सम्भावना पनि हुनुहुन्छ, जसले धुमिलो दृष्टि उत्पन्न गर्दछ।
तपाईंको सेक्सन अंगहरू
यो सहि छ: पुरुष धूम्रपान गर्नेहरूलाई ईरक्शन डिसफंक्शन (ED) झुकाव बढी हुन्छ। र जति लामो तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ, यो त्यति नराम्रो हुन्छ। पुरुष जो धूम्रपान गर्छन् उनीहरुलाई टेस्टिकुलर क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र महिला एथलीटहरू ग्रीवा क्यान्सर हुने बढी झुकाव राख्दछन्।
टेन्डर, रक्तस्राव gums; दर्दनाक हेलिटोसिस! गम रोग दाँतको क्षतिको प्रमुख कारण हो। यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, तब तपाईसँग यसको स्वामित्व हुने सम्भावना २ गुणा छ, र जति धेरै तपाईंले धुम्रपान गर्नुहुन्छ, तपाईंको जोखिम त्यति नै बढी हुन्छ।
यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, तब तपाई स्ट्रोकको सम्भावना भन्दा times पटक भन्दा बढी हुनुहुन्छ - दिमाग भित्र रगतको थक्का जो अनुहारको लकवा, धमिलो दृष्टि, हिड्ने समस्या, र कहिलेकाँही मृत्यु सहित कुनै पनि मुद्दाहरूको कारण। तपाईलाई रक्तचापको स्तर पनि बढी हुन्छ, जसले सेरेब्रल एन्यूरिज्म निम्त्याउन सक्छ। यो तब हुन्छ जब तपाईंको दिमागमा रक्तनलीको भित्ता बाहिर आउँछ। यो चुहावट वा फुट्न र नजिकको टिशूमा रगत इंजेक्शन गर्न सक्छ।
पेप्टिक अल्सर, क्रोन डिसेज, कोलन पोलिप्स, अग्नाशयशोथ (तपाईको अग्नाशयमा सूजन), र अग्न्याशयको क्यान्सर पाचन सम्बन्धी थुप्रै रोगहरू हुन् जसमा तपाई धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बढी हुने सम्भावना हुन्छ। तपाई टाइप diabetes डायबिटीज मेलिटस लिनको लागि pr pr जना ग्रस्त हुनुहुन्छ, जसले तपाईको कलेजो र पन्क्रियासलाई असर गर्दछ।
फोक्सोको क्यान्सर - धूम्रपानको प्रतिशतसँग सम्बन्धित छ - पुरुष र महिलामा समान रूपले अमेरिकामा क्यान्सरको मृत्युको शीर्ष कारण हो। धूम्रपानले अन्य क्यान्सरहरूलाई पनि सम्भावित बनाउँदछ, जस्तै मुख, कलेजो, मृगौला, मूत्र पित्ताशय, अग्न्याशय, पेट, कोलन र मलद्वारको क्यान्सरहरू। साथै यो सीओपीडी (क्रोनिक अवरोधक फुफ्फुसीय रोग) को प्रमुख कारण हो, रोगहरूको समूह जसले फोक्सोको सानो हाउ थैलीलाई क्षति पुर्‍याउँछ।
धूम्रपान कोरोनरी रोगको महत्त्वपूर्ण कारण हो, जसमा अमेरिकामा अधिक व्यक्तिहरू क्यान्सरको कारण मर्दछन्। यो हड्डीहरु र आफ्नो धमनी संकुचित गर्दछ, र यसले तपाईंको रगत को मोटा र क्लोट गर्न को लागी, जो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन को नेतृत्व गर्न सक्छ।